ကျွန်မချစ်သောကဗျာများ: July 2009
ကဗျာနေ့တုန်းကတင်တဲ့ကဗျာတွေထဲမှာ ဝေနော် ရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါပါတယ်။
ခု ဒါ ဝေနော်(သို့)လုံမငြိမ်းချမ်းရဲ့ကဗျာအသစ်ပါ။ ဒီလ(သြဂုတ်)ပိတောက်ပွင့်သစ်
မှာ ကျွန်မရဲ့ ကျွန်မတို့တစ်နေရာစီနေထိုင်ကြတယ် ဆိုတဲ့ ကဗျာနဲ့အတူပါလာခဲ့တာ
ပါ။မဖတ်ရတာကြာတဲ့ မလုံမရဲ့ကဗျာကို အားလုံးကိုလည်းဖတ်စေချင်တာနဲ့ မိုးနေ
ဟိုး မိုးပေါ်မှာလေ ယုန်ကလေးတစ်ကောင်ကို တွေ့နေရလို့ပါ
မျက်လုံးလေးက ပြူးကြောင်ကြောင် နားရွက်ကလေးထောင်လို့
သူ့မှာ သမီးလို သူငယ်ချင်းမရှိပဲ တစ်ကောင်တည်းရယ်
ပျင်းများ ပျင်းနေပြီလား မသိဘူး
ဒီလိုပြောတော့ မေမေက ပြုံးပြီး
ယုန်ကလေးမှာ သူငယ်ချင်းရှိပါတယ် သမီးရယ်တဲ့
ဟင် ... ဘယ်မှာလဲ ကျွန်မဖြင့် မတွေ့မိပါလား ....
အား ... သိပြီ သိပြီ
ယုန်ကလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းက ဆောင်းရာသီ လရောင်ဖြစ်ရမယ်
မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်းလက်တောက်ပနေတဲ့
ယုန်ကလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းက သိကြားမင်း
ပြီးတော့ သုသိတာ သုနန္ဒာ သုမာလာ သုစိတ္တာနဲ့ ရေ၀တီ နတ်သမီး ....
ပေသ၀တီ နတ်သမီး ကဉ္စန နတ်သမီး ၀ိသာခါ နတ်သမီးတွေ ဖြစ်ရမယ်
ဇ၀နနတ်သား မဋ္ဌကဏ္ဍလီနတ်သားနဲ့ နိမ္မာနရတိနတ်သား ၀သတ္တိနတ်မင်း ဖြစ်နိုင်တယ်
နတ်ပြည်ရောက် ဂုတ္တိလ ဆောင်းပညာရှင် နတ်ပြည်ရောက် ဆတ္တမာဏ၀ လုလင်တို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
လက်နဲ့ လှမ်းထိဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့
ဟော့ဟို . . . မိုးသားလွင်ပြင်ထဲက
တိမ်ငွေ့ တိမ်တန်းတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
ကနုကမာ မုတ်ကောင်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
ယုန်ကလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းက သစ်ပင် ပန်းပင် မြေပြင်
ရေမြေ့သရှင် ပြည့်ရှင်မင်းလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
အင်္ဂလိပ်၊ အာဖရိက လူဖြူ၊ လူမည်းတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် Buddhist ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
ရွှေဂေါင်းပြောင် သမိန်ပေါသွပ် တွတ်ပီနဲ့
ပန်းကန်ပြားပျံ အီးတီကာတွန်းရုပ်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
ဂျာနယ်ကျော် မမလေးရဲ့ သွေး၊ ဦးချစ်မောင်ရဲ့ သူလိုလူ
ရာဒီဂိုဂျီမိုမီရာကီရဲ့ “ကမ္ဘာကို မည်သူပိုင်စိုးသနည်း” ရန်ကုန် ဘဆွေရဲ့ “သီကုံးပန်းသွင် ရေးဖွဲ့ချင်သော်”
ထုံချိုင်းကေနဲ့ နှပ်ချေးတွဲလောင်း ကလေးပေါက်စနလေးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
ဆမ်းမားဆက်မွန်ရဲ့ အမ်မလီ ဘရွန်တီလည်းဖြစ်ရမယ်
ဟား... ဓားခုတ်တတ်တဲ့ နှံကောင် စုတ်လဒ်အိမ်မြှောင် ရွှေပိုးကောင်နဲ့
ကြံ့၊ ဂျီ၊ ဒရယ်၊ ဆတ်၊ ပူး၊ ဖွတ်၊ ပဒတ်၊ သမင်၊ ဆင်
ပုရစ်၊ ပလူ၊ ပိုးစုန်းကြူး၊ ကျွဲ၊ လိပ်ပြာ၊ ပျားနဲ့နွား
ဟား ဟား ဟား ဟား ......
အခုန်အပျံ ချန်ပီယံ ဖားပျံ ဖားလတက် ဖားပြုတ် ဖားဂုံညင်းတွေလည်း ဖြစ်ရမယ်
ဆည်းဆာရီ နေညိုချမ်းမှာ ပျံသန်းတတ်တဲ့ ချိုးငှက် ဥသြငှက် သိန်းငှက်
စွန်ငှက် ဘုတ်ငှက် ဖိနစ်ငှက် ပင်ဂွင်းငှက် ဇရက် ဇင်ယော်
ကြိုးကြာ၊ ဟင်္သာ၊ ကျီး၊ ဇီးကွက်၊ ဗျိုင်း၊ ငုံး၊ ခို၊ စာကလေး
ဟေး ... အပြေးမြန်တဲ့ မြင်းကျား၊ လားတစ်ကောင်
သိုးအကောင်ရေ မြောက်များစွာနဲ့ သစ်ကုလားအုပ်
တိတ်ခမီ အဝေး ရုပ်ရှင်ဘိုင်စကုတ်
တိတ်ခမီ အဝေး ဆိုတာ
ကျွန်ုပ်ကို မထားခဲ့ပါနဲ့ ကျွန်ုပ်ကို အဝေးသို့ ခေါ်သွားပါ
ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လာပါတဲ့ ...
ကြိတ်ကြိတ်တိုး၊ ရုံလျှံသွားအောင် ပြသခဲ့ရတဲ့
တိတ်ခမီအဝေး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပြသတဲ့နေ့က
တို့မြို့ပေါ်မှာ ကြယ်ရောင် လရောင်တွေ ထိန်ထိန်သာနေလိုက်တာ
မေမေက တို့လက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး
သမီး အနုပညာဆိုတာ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်တာပါ
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ရယ်ခြင်း ငိုခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်း ACTOR ... ACTRESS တွေရဲ့ ရင်ခုန်ကြည်နူးခြင်း
ကြေကွဲခြင်း စာနာဖေးဖခြင်း ဥပက္ခာပြုခြင်း ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံခြင်း သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်း
တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း ရိုးသားခြင်း စဉ်းလဲခြင်း ပေါင်းဆုံခြင်း ကွေကွင်းရခြင်း
ရက်စက်ခြင်း ကြင်နာခြင်း ငဲ့ညှာထောက်ထားခြင်း တင်းမာခြင်း မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဗျာပါဒ မာယာ
အတ္တ မာန ဒေါသ မျက်ရည်စတွေ ရောပွမ်းစုစည်းနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့
အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ပီပီပြင်ပြင် လှုပ်ရှားသရုပ်ဆောင်မှုတွေက ရုပ်ရှင်အနုပညာတွေရဲ့ ရင်တွင်းမှာ တလှိုက်လှိုက်
မှော်ဝင်စီးမျောနေတဲ့ ဈာန်ဝင်အတတ်ပညာတွေပါကွယ် သူတို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ထားတဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်က
ခံစားမှု အတုဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု တွန်းအားကြောင့် တရှိန်ထိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အံ့မခန်း
လှုပ်ရှားသက်ဝင်မှုတွေဟာ အနုပညာရသ အစစ်အမှန်တွေသာဖြစ်တယ် အနုပညာရှင်တွေမှာ တန်ခိုးမရှိဘူး၊ အာဏာမရှိဘူး
အနုပညာမှာလည်း တန်ခိုးမရှိဘူး အနုပညာမှာ စွမ်းအားရှိတယ် မှော်ရှိတယ် ပရိသတ်ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို တမြေ့မြေ့တသသ၊
ဖမ်းစားနိုင်တာဟာ အနုပညာပဲ ...
မေမေတို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတာနဲ့ အဲဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ခွဲခွာထားခဲ့ရမယ်
ဒါသဘာဝကို လွန်ဆန်တာ မဟုတ်ဘူးနော် သဘာဝကျကျ ဆုံးဖြတ်ခြင်းပဲ ...
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလဲ မေမေတို့ ပရိသတ်အားလုံးကို ခွဲခွာသွားလိမ့်မယ်
ဒါ တရားနည်းကျတဲ့ ဓိဋ္ဌဓမ္မ ရွေးချယ်မှုပဲ
မေမေတို့ အသည်းထဲမှာ စွဲထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာ အငွေ့အသက်ကတော့
နှလုံးသားထဲအထိ မပျောက်မပျက်ဘဲ ထာဝစဉ် တည်ရှိနေလိမ့်မယ်
သေဆုံးခြင်းကြောင့် ခွဲခွာရခြင်း နှစ်မျိုးရှိတယ်
ဘယ်လိုကြောင့်ပဲ ခွဲခွာရ ခွဲခွာရ တစ်ယောက်တစ်ဘ၀ ခြားသွားပေမယ့်
ပြန်လည်ဆုံဆည်းရမယ့် မျှော်လင့်ချက်ပါပဲကွယ်တဲ့ 'I hope to see you again" တဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့
“တို့ အဲဒီကတည်းက ခွဲခွာရမယ့် ဝေဒနာကို မနှစ်သက်ခဲ့တာ အမှန်ပါ
ယုန်ကလေးကို ခွဲခွာသွားမယ့် မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ
သိကြားမင်းနဲ့ ပဇာပတိ၊ ၀ရုဏ၊ ဤသာနစတဲ့
၃၃ ပါးသော နတ်မင်းကြီးတွေရှိတယ်
ဝေဇယန္တာပြသာဒ် ပင်လယ်ကသစ်ပင် ကဏ္ဍုကမ္ဗလာမြကျောက်ဖျာနဲ့
နန္ဒ၀န်ဥယျာဉ် စိတ္တလတာဥယျာဉ်၊ သုဓမ္မာဇရပ်ရှိတယ်
စတုမဟာရာဇ်နတ်ဘုရင် ဝေဿ၀ဏ်နတ်မင်းကြီးရဲ့ အခြံအရံ
နိမ္မာနရတိ နတ်ပြည်က သုနိမ္မတနတ်မင်းရှိတယ်
ပဉ္စသီခ နတ်သားရှိတယ်၊ ဘုရားလောင်းများ စံလေရှိတယ်။
တုသိတာ နတ်ဘုံက သန္တုဿိတာ အကြီးအကဲ နတ်မင်း ရှိတယ်
အကာသ မိုးကောင်းကင် တစ်ခွင်လုံးရှိတယ်
ကြယ်စင် နက္ခတ်တာရာတွေ အားလုံးရှိတယ်
အမှန်တရားကို တွေ့ရှိဖို့နဲ့ အမှန်တရားကို လက်ခံနိုင်ဖို့
လူတွေရဲ့ဦးနှောက်ဟာ အဆင့်မြင့်ဖို့ လိုအပ်တယ် ဝေခွဲပိုင်းခြားတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်
လောကမှာ အရေးကြီးဆုံးက အသိဥာဏ်
အသိတရားနဲ့ ယှဉ်တွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အသိဥာဏ်သာ
မတော်တဆ ဟန်ချက်လွဲ သွားခဲ့ရင်
နောင်တရမယ့် အမှားကိုသာ ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့
ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲ မဟုတ်ဘူး
ရွှေတုံး ရွှေခဲလည်း မဟုတ်ဘူး ငွေတုံး ငွေခဲလည်း မဟုတ်ဘူး
လှိုင်းပေါ်မှာ လူးနေတဲ့ လှေငယ်ကို …
ဘေးမသန်းပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း ကူးခတ်သွားချင်ကြတာပေါ့
သောကြာဂြိုဟ်မှာ မရှိတာတော့ သေချာပါတယ်
လူသားဆန်ဆန် … လူ့လောကကြီးထဲမှာ …
လူ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်တယ် …
ဆော့ချိန် ဒုန်းပေါက်ဆော့ကစားလိုက် စာသင်ချိန်မှာ စာသင်လိုက်နဲ့
ရေစီးကြောင်းထဲမှာ ဒိုက်သရိုက်တွေ မျောပါနေသလို
ဖြေရှင်းဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အယူအဆတွေကလည်း စက်ယန္တရားတွေ တပ်ထားသလို
သူတို့လိုရာကို ဗဟိုပြု ခုတ်မောင်းနေကြတယ်
မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခိုင်မာစေတာပါ
ယုံကြည်မှုကို ဥပေက္ခာပြုကြတာကတော့ ပုထုဇဉ် …
လူသားတွေရဲ့ ဇာတိပုည ဂုဏ်မာနတွေပေါ့ကွာ
ဟာ … စိတ်ရှုပ်လိုက်တာ
ဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲက လူသားတွေနဲ့ နင့်အတွက်
မနည်းမနော တွေးတောနေရတာ ဦးနှောက်တစ်ခြမ်းတောင်
ထိုး ထိုး ထောင် ထောင် ဖြစ်လာပြီ မေမေ …
ဒီတော့မှ မေမေက ရေအင်တုံထဲ ရေဖြည့်ပြီး
ကျွန်မကိုလည်း သမီးရေ လာကြည့်စမ်းဟေ့လို့ လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်
ကျွန်မ အပြေးအလွှား သွားကြည့်တော့
လား .. လား.. ယုန်ကလေးကို တွေ့လိုက်ရတာပေါ့ နီးနီးလေးရယ်
သိပ္ပံဆရာမကလေ အဲဒါ ယုန်မဟုတ်ဘူး ချိုင့်တွေ ကျင်းတွေတဲ့
ကျွန်မဖြင့် ဆရာမကို စိတ်ဆိုးချင်တာပဲ
ဒါပေမယ့် ငရဲကြီးမှာ ကြောက်လို့ မဆိုးရဲပါဘူး
နောက်နေ့မှ ဆရာမကို ပန်းလက်ဆောင်ပေးရင်း ဒီလိုပြောလိုက်မယ် မေမေ
ဆရာမရယ် ချိုင့်တွေ ကျင်းတွေက ရေကူးတတ်ပါ့မလား
ယုန်ကလေးမို့လို့ မနေ့ညက ကျွန်မတို့ အင်တုံထဲဆင်းပြီး ရေကူးတာပေါ့လို့ … ။
Posted by MANORHARY at 6:07 AM4comments
မင်းဘာကြောင့် ငါးကို မစားတယ်
သြော်. . . သံယောဇဉ်ဟာ ဆန်းကြယ် ။ ။
ညရထားနဲ့ အမှောင်ထဲ ခရီးသွားစဉ်
တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ။
ကျွန်တော့် ဖောင်တိန်ထဲက စကားလုံးတစ်လုံး
ကျွန်တော် စိတ်ပျက်တယ်။ ။
ညထဲ မိုးတိမ်တွေ တရွေ့ရွေ့
အိပ်ရာထဲမှာ ဆီးဟောင်းအနံ့ ။ ။
ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ သုညကို ရိုက်ခွဲပြီးပြီ
အိပ်စက်လို့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်။ ။
ထရပ်ကားပေါ်က သစ်သီးတွေ။ ။
သတိရတယ် . . . တဲ့
ကမ္ဘာမြေတစ်နေရာက အပ်ကျတဲ့အသံကလေးပါ။ ။
ဘယ်သူမှ မသိပါ။ ။
မရေးရသေးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်အတွက်ပါ။ ။
ငါ့အိမ်ကော ဘယ်သွားနေလဲ။ ။
ငါ့ရင်ထဲမှာ မင်းရှိတာ။ ။
ကျုပ်လား . . . ပင်လယ်ဆီသွားနေတာပါ။ ။
ဂြိုဟ်ကမ္ဘာတစ်ခုရောက် သက်ရှိမျိုးစိတ်တစ်ခုရဲ့ မှတ်ချက်
အမှန်တရားနဲ့ သီသီလေး လွဲသွားတာတစ်ခုပါပဲ။ ။
သြော် . . . သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာ။ ။
ငါပြောတာ မင်း ယုံဖို့ မလိုပါ
မင်းပြောတာလည်း ငါ မယုံပါ
ငါတို့ ခင်မင်နေကြမြဲသာ။ ။
လူတွေ စကားပြောကြသလို ပြောကြည့်ချင်တယ်တဲ့။
မင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲက မသိမှုဆီက လာခဲ့တာ။ ။
ဒါကြောင့် သူဟာ အိပ်မက်မမက်ဘူးပေါ့
ဒါပေမယ့် သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ညကမ္ဘာကြီးဟာ
ကြက်ကလေးတစ်ကောင်တွန်နေတာ ။ ။
လူတွေက ကျွန်တော့်ကို လူအ လူအလို့
ကျသင့်သလောက် ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ ။
ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ကျီ
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော် ၀တ်ခဲ့တာ။ ။
အိုး ....ငါ့အချစ်ဟောင်း။ ။
၅။ တိတ်ဆိတ်မှုနဲ့ အနွေးဓာတ်
၆။ မြင်းရိုင်းတစ်ကောင် (စိတ်ကူးထဲမှာ စီးကြည့်ဖို့)။ ။
ပို၍ကြီးမားသော မဟာဧရာမမီးရထားကြီးဆီသို့။ ။
လေနီကြမ်း၊ သဲမုန်တိုင်း၊ တံလျှပ်
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်၊ ရေဘူး၊ သစ်သီးခြောက်
ကုလားအုပ်၊ အော်သံ၊ တိတ်ဆိတ်မှု
မျက်စိလည်ခြင်း၊ ဟိုးအဝေး၊ မျက်စိတစ်ဆုံး
ကျွန်မ မလွမ်းရဲပါဘူး ဘဘကြီးတဲ့
ဒါပေမယ့် ကဗျာဆရာငါက အသေအချာပြောဝံ့ပါတယ်ကွယ်
အဲဒီကောင် အမြဲရှိနေလိမ့်မယ်။ ။
လင်းတတွေသာ ငါ့ကို အရသာခံတတ်ကြပေလိမ့်
တားမြစ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်မိတယ်
တားမြစ်ထားတဲ့ အိပ်ရာမှာ အိပ်မိတယ်
တားမြစ်ထားတဲ့ အိပ်မက်တွေတစ်ညလုံး မက်ခဲ့
ကိုယ်ဟာ တခြားကမ္ဘာက ဂြိုဟ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့။ ။
ဒုတိယအကြိမ် ဖတ်ရှုရန် မလိုအပ်တဲ့ကဗျာ
ကျွန်တော် မယုံတာ (၃)ခုရှိတယ်။
၁။ ကျွန်တော်။ (၂)ခင်ဗျား၊ (၃) အခြားတစ်ယောက်
(၁) ကျွန်တော်၊ ၂။ ခင်ဗျား၊ (၃) အခြားတစ်ယောက်။ ။
ကျွန်တော် ညအခါ အိပ်ရာထဲလဲလျောင်းလိုက်ရာ
အဲဒီအခါ ကျွန်တော်ဟာ စက္ကူတစ်ရွက်ဖြစ်လို့သွား
လေလွင့်စက္ကူရွက်ပေါ် မင်းနာမည်ရေးလိုက်ပါလား။ ။
ည ၉း၂၀ နာရီ
စောင့်ဆိုင်းနေသလို ရပ်လို့ ပေါက်ရောက်နေတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်
သစ်ပင်အောက်မှာ တစ်ခါတလေ ကောင်လေးတစ်ယောက်
ရပ်လို့။ လမ်းမကို ငေးလို့။ ။
ည ၈း၀၅ နာရီ
ခဲတံ ခဲတံ မင်းဘာကြောင့် အိပ်နေတာလဲ
ခဲတံ ခဲတံ မင်းဇာတိဟာ ဘယ်ကလဲ
Posted by MANORHARY at 7:02 AM3comments
ကဗျာများကို မူလ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်ခုနှစ် သက္ကရာဇ် အလိုက် ဖော်ပြထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကဗျာဆရာနှင့် စီစဉ်သူတို့၏ စိတ်ကူးခံစားမှုအလျောက် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကဗျာများကို အပိုင်း(၅)ပိုင်းခွဲထားပါသည်။ မိဝင်းဖို့ကဗျာများသည် ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ကဗျာများကို မိန်းကလေးတစ်ဦးဦး၏အမည်ပေးရန် လိုအပ်သည့် အတွက်စဉ်းစားသော အခါ ရင်းနှီးခင်မင်သော မိန်းကလေးတို့၏ အမည်ကိုစဉ်းစားမိသော်လည်း ထိုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ဇာတိ အောင်သာရွာသို့ အပြန် မန္တလေး-မြင်းခြံ ဝင်း အမြန်မော်တော်ကားကြီး ပေါ် စီးနင်းလိုက်ပါလျက်ရှိရာ ၄င်း ဝင်း အမြန် မော်တော်ကားကြိးကို အစွဲပြု၍ မိဝင်းဖို့ကဗျာ ဟူ၍အမည်ပေးလိုက်ပါသည်။။။
ဆိုတာမျိုးကျ မင်းက ယုံပြန်ရော။
မင်း ဘာသာပြန်လို့ မရနိုင်လောက်အောင်
တစ်ခါတည်းသာ ခုန်ချလိုက်ချင်ရဲ့။ ။
ုစုန်းမတွေရဲ့ သန်းခေါင်ယံ အစည်းအဝေးပွဲည
ဒါ အကုန်ပဲ လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကွယ်။
နေမင်းကြီးလည်း နေ့တိုင်းပဲ လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်း။
ငါ့ဘဝကြီးကို ငါ ပြန်ပြီးတွယ်ငြိခဲ့ရပေါ့။
ဤကဗျာစုမှာ ပင်လယ်မဂ္ဂဇင်း (ဖေဖော်ဝါရီ၊၁၉၉၃)တွင် ဖော်ပြခဲ့သော နွေနေ့လယ်မှ မြူဆွယ်ခြင်း ဝတ္ထုတိုတွင် ဇာတ်ကောင်နှစ်ဦး အပြန်အလှန် ရွတ်ဆိုကြသည့်စာပိုဒ် များဖြစ်ပါသည်။ဝတ္ထုတို၏ ရှေ့ပိုင်းစကားပြေများကိုချန်လှပ်၍ နန်းတော်ရှေ့ ဦးဘကျော့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှ ရန်ကင်းတောင်ခြေ သို့လမ်းလျှောက်ရင်း ကဗျာရွတ်ဆိုကြသည့် အတိုင်းကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လာပြီဟေ့ ခြင်္သေ့ ဆိုပြီး
ထင်းရှူးတောကြီးကို ဘယ်သူမှ မတားဆီးနိုင်သလိုမျိုးပေါ့
နောက်ဆုံး လမ်းခွဲဖြစ်တဲ့ သင်္ချိုင်းကုန်းတွေက
ဒီရေကို တားဆီးဖို့ အမိန့်မပေးနိုင်ကြောင်း
ကနွတ် ဘုရင်ကြီးက သက်သေပြခဲ့။
သူဟာ သြညီဂင် ပါပဲတဲ့
မင်းအတွက် ငါ မီးကိုခိုးယူခဲ့
ဘောရစ်ပစတာညက် နဲ့ မြွေတစ်ကောင်အကြောင်းတွေးမိ
ဟောဒီ အနာဒိ အနန္တစက်ဝန်းထဲမှာ
တို့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တစ်သက်လုံး
သွားစေလို့ ငါ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်
နာရီတွေ တကယ်သွားတာ မသွားတာ
သူ့မွေးနေ့ ဇာတာကို သူမမှတ်မိတော့
ဂျွန်တာဂရပ်ရဲ့ တင်းဒရမ် ကို
ချဉ် ငန် စပ် မိုးကောင်းကင်ကြီးရေ
လွဲမှားမှုနဲ့ အမြဲတမ်း ပေးဆပ်နေရသူ
ဟေ့ .. မိဝင်း
ဟား ….. ….. ….
….. ….. ……. အားးးး။
အတွေ့အကြုံ အတွေးအခေါ် လေ့လာမှု
(ကိုသိုက်ထွန်းသက် သို့ ကျီစားခြင်း)
ရွှေဝတ်ရည် မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၅)
အမှတ် (၁၁) ၁၉၉၁
မင်းနဲ့ငါ လက်ရည်တူတွေပဲ။ ။
ငါကြား တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာ
တို့ သည်လိုပဲ ရေးကြရတော့တယ်။
ဤအပိုင်းကဏ္ဍမှ ကဗျာစုတို့ကို စိတ်အားဖြင့် ပိုင်းခြားရာတွင် နှစ်ပိုင်းရှိခဲ့သည်။ တစ်ပိုင်းမှာ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှစပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကာလအထိဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ပိုင်းမှာ ထို ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှ သည်ဘက်ပိုင်း ပစ္စက္ခ ကာလအထိဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ပထမပိုင်း ကဗျာကလေးများမှာ ကျွန်တော်က မည်မျှပင် သံယောဇဉ်ရှိသော်လဲ ၎င်းတို့မှ ဥမမယ် စာမမြောက် နုနယ်သည့်အရာများသာမို့ ကြွင်းကျန်ရစ်ခဲ့သော အပိုင်းအစ များအဖြစ် ချန်လှပ်ခဲ့ရပါသည်။ ဤ ရာဇဝင်အပိုင်းကဏ္ဍတွင် ၁၉၇၅ခုနှစ်သည်မှာဖက်ပိုင်း ကဗျာအချို့ကိုသာ ဖော်ပြထားပါသည်။
ငါ ရယ်မောပစ်ခဲ့ပေါ့ ။
လူတိုင်းဟာ ငိုကြွေးနိုင်ခွင့် ရှိတယ်မဟုတ်လား။
ဒီကနေ့ ဆိုတာကို ရှာလို့တွေ့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
တရားအသစ် ဖူးပွင့်ခဲ့ပြီ။ ။
သူ့ဗိုက်ကို သူ့ဓားနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ဆွဲပြီး
ဟေ့လူ …ဒါ ပို့စ်မော်ဒန်တစ်ခုပဲလား
ကိုမြဝင်းရဲ့နှဲသံ တတော်တော် တတီတီသာ မြည်နေပါစေ။
သိုးတွေ ဒုဂ္ဂတိဘုံပေါ် ရောက်သည်အထိ။
မြို့ရိုး ကျုံးထိပ် သစ်ရိပ်ပလက်ဖောင်တစ်လျှောက်
……. …….. …….
…… …… ……။
လောကကို ပြက်ရယ်ပြုတတ်တဲ့ ငါ့မိတ်ဆွေဟာ
ဟောဒီ ၈၄ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ
တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သာသနာတော် တည်ရှိရဲ့။
တစ်စက္ကန့် တစ်မိနစ် တစ်နာရီ တစ်ရက်
သူ့ဘာသာသူ ရောက်လာပါစေ …တဲ့။
အာဟာရပြည့်ဝ လွတ်လပ်စွာ ပညာသင်
သူတို့အတွက် သီးသန့် ပန်းဥယျာဉ်တွေနဲ့။
ပြီးတော့ လူတိုင်းအတွက် ဆေးဝါးအလျှံပယ်
အဲသည်လို ကမ္ဘာကြီးမျိုး။ ။
ယာခင်းထဲက ပြောင်းပင်တွေကို ကိုက်ဖြတ်လို့။
ငါလျှောက်ခဲ့တဲ့ သဲထူထူ မြေလမ်းပေါ်
ငှက်တချို့ တေးသီနိုင်ပါ့မလား။ ။
ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထ ငါ့ကိုယ်ငါ ဂုဏ်ယူ
ငိုကြွေးမိမတတ် ငါ့ကိုယ်ငါ လေးမြတ်
လျော်ကြေးအဖြစ် ငါလိုချင်တာ ငြိမ်းချမ်းရေးလား
အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပန်
ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ် အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်း
စီးဆင်းခြင်းသာ မင်းရဲ့ အာဟာရဖြစ်ပါစေတော့။
နီလာတိုးဟာ အနုပညာရှင် အဆင့် (၃)
နီလာတိုးဟာ မက်ဒေါနားလို ကမ္ဘာကျော်နိုင်သူပဲ။
အယုဒ္ဒယနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်္ဂလန်
သူကိုယ်တိုင် တကယ်သေကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့လို့
ကြာနီကန်သုဿန်ကို ရှောရှောရှူရှူ သွားခွင့်ရတယ်။
တက်ပြီး မေ့သွားတယ်၊ ဝိုင်းပွေ့ကြတယ်၊ ရင်ကိုဖိကြတယ်။
အရပ်ကတော့ အရင်အတိုင်း ပုမြဲပုတယ်။
တက်ပြီးမေ့သွားတဲ့ နီလာတိုးကို ဝိုင်းပွေ့ကြ
သူ့ဝိညာဉ်ဟာ တိမ်တိုက်တွေထဲ ကျွမ်းထိုးပြီး
အလောင်းကောင်ရဲ့ ညှော်နံ့တွေက မွှန်လို့
ခေါင်းတိုင်က ထွက်လာတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေက
သူတို့ရဲ့ စိတ်ဒုက္ခတွေကို အော့အန်ဖို့တော့
ခြေထောက်တွေရဲ့ ဘာသာဗေဒကို လေ့လာရင်း
ရေဆိုးမြောင်းတွေထဲ တဝေါဝေါ ထိုးဆင်းသွားပေါ့။
ဘုရားသခင်ကို သူတို့ကျေးဇူးတင်ကြရပြီပေါ့။ ။
ရှန်ပိန်အရက်ကို ပုလင်းလဲ တစ်ဝက်ချန်ထားရမှာ
ဟဲမင်းဝေး သိပ်မုန်း ဆိုပဲ။
အိတ်ကပ်ထဲ တစ်စက်မှ ရေမဝင်ဘူး
တရားထူးနဲ့ အဖျားရှူး သွားတတ်တယ်။
ကာကွယ်နေသူ ဖြစ်ချေ၏။ ။
စိတ်၏ ဂယ်(ကယ်)ပေါက် များဖြစ်ပါသည်။ ရည်ညွှန်းချက် အထူးမရှိပါ။
အမြဲတမ်းစိမ်းကားတတ်တဲ့ မစိမ်းမြကို သတိရမိတော့
စ်ိမ်းသွားတဲ့ မစိမ်းမြကို သတိရ
အစ်ိမ်းရောင် ငှက်ကလေးတွေ ဝဲပျံနေကြ
သြော် မစိမ်းမြ မစိမ်းမြ
စိမ်းကားတဲ့ မစိမ်းမြရဲ့ အမည်ကို ရေးထိုးခဲ့
စိမ်းနိုင်ရက်ပေရဲ့ စိမ်းရက်တဲ့ မစိမ်းမြရယ်။
အစိမ်းရောင်ပင်လယ်ကြီးထဲ ရွက်လွှင့်ခဲ့။ ။
ဗုံတွေဟာ တီးဖို့ မဟုတ်တော့ဘူး
တစ်စက်မှ ရေမရှိတဲ့ မြစ်ကြီးထဲ
အနွေးဓာတ်ပါတဲ့ အနမ်းရဲ့ အငွေ့အသက်ဟာ
သရဖူမဆောင်းတဲ့ တို့ရဲ့ မာနတရားကတော့
ဝံပုလွေတစ်ကောင်ရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု မဖြစ်နိုင်
အဝေးက ပြန်လာနေပါပြီ။ ။
အတိတ်ရဲ့ဘဝတွေ ဖြတ်သွားဆဲပါ မေ။
ရေ မြေ လေ မီး
ဒြပ်မဲ့ ကမ္ဘာပေါ် ရပ်တည်ရခြင်းပါ
ရောက်ချင်ရာရောက် လှော်တော့မယ်။ ။
မဟေသီ မဂ္ဂဇင်း ၊၁၉၈၅
စိတ်ကို စိတ်နဲ့သာခေါ်ရ ထူးရ
လမ်းဖြတ်ကူတိုင်းမှာ ရတနာသုံးပါးကို ရွတ်ဆိုမိရ
ကဲကွာ.. ……… ………… ……….
………….. ……….. ……….. ………….
ဒါဟာ သူ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပါပဲတဲ့လေ
ငါ့ရှေ့မှာ ရူးရူးနှမ်းနှမ်းတွေ လုပ်ပြလိုက်
ဒါမျိုးတွေ ငါ လက်မခံပါဘူး။
ကြယ်တံခွန်တွေရဲ့ အန္တိမ ရည်မှန်းချက်ဟာ
အစီအစဉ် အထားအသို အနုပညာကိစ္စ
ငါ့ဘဝထဲ ငါမဟုတ်တာတွေ ထည့်ထားတာ
အရက်မူးနေတဲ့ ကြယ်တံခွန်ကြီးတစ်ခုသာလေ။ ။
ထိုအတိုင်းပင် ကျွန်တော် ဆက်လက်တွေးခေါ်ရလိမ့်မည်။
ဗျာဒိတ်တော်ကို အလေးမထားသူ တစ်ယောက်တော့လည်း
မခင်လေးကို ကျွန်တော် ချစ်သည်
မခင်လေးကိ ကျွန်တော် ချစ်သည်
ထိုအတိုင်းပင် ကျွန်တော် ဆက်လက်တွေးခေါ်ရပါလိမ့်မည်။ ။
Posted by MANORHARY at 4:40 AM 1 comments
ပိုင်စိုးဝေ ၏ ကဗျာများ
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်၊ညနေ ၅ နာရီ
ကိုယ့်စိတ်နှလုံး ငြိမ်သက်မှုရဲ့ တစ်စက္ကန့် အတွင်းမှာ
မငြင်းဆိုနိုင်သေးသမျှ ချွင်းချက်တွေကပဲ အနိုင်ရနေမှာပေါ့။
လက်ပြနေတာ ဘယ်သူလဲ။ ။
Posted by MANORHARY at 1:10 AM 1 comments
ငါ နမ်းမွှေးရှိုက် ရင်ကိုခိုက်၏
သခင် .. သိပါ။
ငါနှင့် ကြယ်တို့ ညမြို့ရိုးထက်
Posted by MANORHARY at 5:56 AM 1 comments
Song and La Belle Dame Sans Merci
Song ကိုတော့ လူတော်တော်များများသိကြမှာပါ။ ခရစ္စတီနာရဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မ အဲဒီကဗျာလေးကိုပထမဆုံးဖတ်မိတာက ဆရာနီမင်းဆွေရဲ့ ချစ်သွေးဝေဝေဆိုတဲ့ ဝတ္ထုစာအုပ်လေးထဲကပါ။ အဲဒီထဲမှာ ဘာသာပြန်လည်းပါပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်ကောင်မလေးက ခရစ္စတီနာရဲ့ ကဗျာတွေကိုကြိုက်တဲ့အတွက် ဇာတ်ဝင်ကဗျာအနေနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့မှတ်မိနေပါတယ်။အဲဒီမှာဘာသာပြန်သူက ဆရာမြင်းမူမောင်နိုင်မိုး ပါ။ အင်္ဂလိပ်ကဗျာတွေကို မြန်မာလိုပြန်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာကဗျာစပ်နည်းဘောင်ထဲလည်းဝင်အောင် အဓိပ္ပာယ်လည်း
မပျောက်အောင် လှလှပပ ပြန်တတ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကို ကျွန်မသတိထားမိပါတယ်။
သူတို့ကတော့ ခုကဗျာကို ဘာသာပြန်တဲ့ ဆရာမြင်းမူမောင်နိုင်မိုးနဲ့ ဆရာ တက္ကသိုလ်
ဘုန်းနိုင်တို့ပါပဲ။ ခု တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ဘာသာပြန်တဲ့ ကရုဏာမဲ့သည့်လှဒေဝီ (မူရင်း La Belle Dame Sans Merci ..) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကဗျာကိုတော့ ၁၉၉၀ ပန်းဝေသီ
မဂ္ဂဇင်း၊ဖေဖော်ဝါရီထုတ်ထဲက ကူးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဆရာက အဲ
လိုဘာသာပြန်ကဗျာတွေကို အတော်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျစ်ပစီအဘိုးကြိးအိုအချိန် တို့
လွမ်းပျော်မွေ့ကြီး တို့လို ကဗျာတွေလည်းပါပါတယ်။နောက်များမှ အဲဒါတွေကိုလည်းအမှတ်တရတင်ပေးပါဦးမယ်။
Sing no sad song for me
Be the green grass above my
With shower and dewdrops wet
ငါ့ကိုကွယ် ချစ်သလိုငေးလို့၊တိုးတိုးလေး ညင်သာစွာ၊
နှင်လာခဲ့သည်တွင်း ။ ။
တစ်နေ့လုံး ပတ်ကုံးတဲ့ဝန်းကျင်၊ မမြင်ပါ သူ့သာငေးမိ
တစောင်းလေး သူ့ကိုယ်နေ၊ငါ့ဘက်လေ လှည့်ခွေရစ်လို့
`မောင့်ကိုလေ မေတ္တာစစ်နှင့် ချစ်မိပါလေး တဲ့။ ။
နတ်သူငယ် ရုက္ခစိုး၊လိုဏ်မျိုးကွယ် သူ့ဂူတွင်းသို့၊ခေါ်သွင်းပြီးမှ
ကရုဏာမဲ့သည့်လှဒေဝီ ကျွန်ပြုပြီမင်းကို ဖမ်းပေါ့
ငါမြင်သည် မှောင်ရီဖျ၌၊ ငတ်ကြသည့်နှုတ်ခမ်းတွေ
ချမ်းအေးကာ ဆိတ်လို့သုဉ်းတယ်၊ဘုန်းမောင့်ကိုယ်တည်း။ ။
ခြေလှမ်းရာလူပါလို့၊ယောင်ချာချာလှည့်ကာသွား ။ ။
တေးပျောက်ကာ ဆိတ်လို့သုဉ်းပေမယ့်၊ဘုန်းမမှုအား။ ။
Posted by MANORHARY at 4:04 AM0comments